Ama-dandruff omile, izizathu. Ukwelashwa kwamakhemikhali abantu abomile abomile, izindlela zokupheka ekhaya.
Ubuhle besifazane Ukunakekelwa Kwezinwele
Amakhemikhali asebenza kakhulu kunazo zonke ngokumelene ne-dandruff eyomile
Ukushicilelwa ngisho nezinwele ezinhle kakhulu futhi ezihlotshiswe kahle kungaphazamisa kalula inkinga evamile kakhulu - inkinga. Uma ungeke ukwazi ukubhekana nakho ngokuhamba kwesikhathi, i-banal "ama-flakes amhlophe" angathuthuka abe yingozi kakhulu futhi kunzima ukuphatha izifo. Ikakhulukazi, ukwehliswa okomile kungabangela ukulahleka kwezinwele kanye nokuhlukumeza. Ngakho-ke, sikunikeza izindlela zokupheka eziningana zokulwa ne-seborrhea eyomile, engakulungiswa ekhaya.
I-dandruff eyomile: izimbangela zokubukeka
Eqinisweni, "amahlumela amhlophe" enzondo amane nje ayizinhlayiya zesikhumba ezifile. Isikhumba sethu sinendawo okumele ivuselelwe ngaso sonke isikhathi, futhi isikhumba saso sihlukile. Amaseli aphethwe kancane kancane anamathele ndawonye, ​​enza ama-flakes. Ngomuntu onempilo, le nqubo cishe ayitholakali, ngoba izinhlayiya ezifile ziyasuswa kalula ngokuhlanza ikhanda. Kodwa uma imbangela yama-flakes ekhona ekusebenziseni ukungasebenzi kahle kwezingqungquthela ze-sebaceous nokuntuleka kwe-sebum, khona-ke baba yisignali ekuthuthukiseni i-seborrhea - isifo esihambisana nokushaya kanye nokuzwa kobunzima besikhumba. Ngakho-ke, ukuze ubhekane nale nkinga, okokuqala, sidinga ukuqonda isizathu sokubukeka kwayo.
Izinto ezifaka isandla ekwakhiweni kwe-dandruff eyomile:
Ukugeza njalo ikhanda (kuphula ukukhiqizwa kwe-sebum)
imikhiqizo yokunakekela ekhethiwe ngokungalungile (ingaba ifilimu esikhumbeni futhi ibangele ukusabela okweqile)
ukungondleki (ukuhlukumeza okwesiphuzo, ukuphuza, inani elinganele lamanzi adakiwe ngosuku)
ukungabi namavithamini, ukuphazamiseka kwemizimba kanye nokwehluleka kokuzivikela
Ukwelashwa kwe-dandruff eyomile kumele kube yinkimbinkimbi, ngaphandle kwalokho le nkinga izobuya. Ngaphezu kokuthi ama-pharmacy anezinhlobo eziningi ze-seborrhea, ungabhekana nayo futhi usebenzisa amakhambi abantu.
Izindlela zokupheka ekhaya ngokumelene nokukhwabanisa okumile
Ama-masks ama-seborrhea owomile
Njengoba i-dandruff eyomile ngokuvamile ibonakala ngokukhiqizwa okwanele kwe-sebum, indlela elula yokuyiqeda iyi-mask yamafutha. Kulezi zikhathi ezingu-1-2 ngesonto, kufanele ugaye amafutha omzimba we-scalp emzimbeni wesibhakabhaka: i-burdock, umnqumo, amafutha we-castor. Ngaphezu kokuqeda ama-dandruff, bafaka isandla ekwandeni nasekuqiniseni izinwele. Ngakho-ke, isibonelo, i-burdock amafutha ebhodleleni idinga ukushiswa emanzini okugeza futhi afake efudumele - ngakho angene esikhumbeni nasezinwele kangcono.
Ungase futhi ulungiselele umasikisi oju uju namafutha ngokumelene ne-dandruff eyomile. Ukuze wenze lokhu, thatha isipuni esingu-1 samafutha we-burdock bese usixuba ne-1 isipuni soju kanye ne-yolk eyodwa.
Isithombe 2. Konke ukuxuba ngokucophelela, gubungula ingxube eqediwe ezimpandeni bese ugoqa ithawula cishe ihora. Sebenzisa le mask kanye ngesonto okungenani inyanga.
Ukuqinisa iMasonnaise Mask
Isiza ngokumelene nemayonnaise etafuleni ye-dandruff nejwayelekile. Ukubukeka kwakhe okubonakalayo kungahle kubonakale kungavamile, kodwa le recipe iphikisana ngokuphelele ne-dandruff futhi yenza izinwele zibe namandla futhi zikhanyise.
Ukuze kulungiswe imayonnaise mask, kubalulekile: imayonnaise, uju, i-hudo burdock kanye nejusi le-aloe ukuxuba ngokulinganisa 2: 1: 1: 1. Engxenyeni elungiselelwe faka 1 i-egg yolk eluhlaza, uhlanganise futhi futhi usebenzise izinwele.
Ngemuva kwemizuzu engu-20, i-mask kumele ihlanjululwe kahle. Ukuqeda iphunga elihle le-yolk, izinwele zingahlanjululwa ngamanzi anejusi kalamula.
Ukupheka kwezinhlayiya zemifino ngokumelene ne-dandruff eyomile
Ngaphandle kwamaski, empini yokulwa "nama-flakes amhlophe" kubuye kuphumelele ukusebenzisa ama-decoctions ahlukahlukene. Isibonelo, iresiphi elandelayo iyasiza. Brew impande burdock (20 g ngalinye 200 ml amanzi), ukuphikelela imizuzu 20, ukukhipha umhluzi. Ukumnika ukugcoba ku-scalp imizuzu engu-10-15, bese ugeza ngaphandle kwe-shampoo. Sebenzisa leli thuluzi ngosuku noma ezimbili.
Ngalesi simiso, ungakwazi ukuphuza nezimbali ze-lime, i-chamomile, i-mint, i-calendula. Kanti futhi, kusukela emgodini kanye nokusiza kusiza i-decoction ye-nettles ehlanganiswe ne isipuni samafutha yemifino, i-egg yolk kanye no-20 ml. we-vodka. Le ngxube kufanele ihlutswe esikhumbeni imizuzu engu-20-30, bese ugeza kahle bese ugeza ngamanzi ngejamu lemon.
I-Hairbranding: okuphawulekayo kwezindlela zokwenza izinwele
Indlela yokwenza izinwele ezibukhali
Izinwele ezinempilo nezinamandla: silungiselela imishini yokubuyisela ekhaya
9 ilawula indlela yokwenza izinwele zihle
Amaski aqediwe asetshenziswe kanjani izinwele?
I-Canary parish eSpain yiyona
Amalungiselelo e-thermogenic: ukwakheka nokusetshenziswa kwamalungiselelo
Indlela yokubeka izitshalo zasendlini
Ikhukhi elifishane elinama-blackberries ne-cream ehlutshiwe
I-cheese roll ne-salmon enosawoti
Ama-pretzels azenzele ngokugcwalisa
Ungabuyisa kanjani isikhumba izinsuku ezingu-10 ekhaya?
Kungani abantu beziphatha kabi?
Ihlumela ne-banana fritters
Amathiphu amaholidi ehlobo ngoJuni
I-Pepper eyigcwele iklabishi ebusika
Isinkwa nge-artichokes, ushizi nogalikhi
Usuku lukaSt. Patrick ngo-2016 eRussia
Indlela yokubeka ingane ukuba ilale ngaphandle kwesimo?
Ukuvakasha njengendlela yohlobo lomsebenzi